Uruguay: CIP, Vohikala ho an’ireo horonantsary sy ireo sarimihetsika fohy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2009 4:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, 繁體中文, 简体中文, bahasa Indonesia, English
Antsoin-dry zareo hoe fomba iray hafa hamoahana ireo video vokariny izy ity mba tsy hifaninanany amin’ireny video novokarina tany an-trano ho fankalazana tsingerintaona ireny, ireo videoan-tsaka ary ireo horonantsarin-kira ho an’ny karaoke. Tanora roa avy any Uruguay no nanapa-kevitra hanova ny zava-misy ka namorona ny Cip, vohikala natokana hanehoana ny sarimihetsika novokarin'ireo mpamokatra horonantsary mahaleontena, izay afaka maka ny sarimihetsika nataon-dry zareo avy any amin’ny toeran-drakitra any ary mizara izany amina fiaraha-monina midadasika kokoa, tsy misy fahasamihafana betsaka amin'ny fomba fiasa any amin'ny tantara tsangana ireny izy it, misy fampahafantarana mialoha, fandaharana manaraka vanimpotoana sy toeram-pijerena sarimihetsika samihafa.
Isaorana i @damianemanuel1 ao amin’ny twitter izay nahitanay ity vohikala ity, raha namoaka fa:
Toerana virtoaly fijerena sarimihetsika avy any Uruguay hiadiana amin'ny hagaigen'ny Youtube.
puede ser vista en http://www.cip.com.uy/
Raha ny filazan'ireo mpamorona ilay vohikala, Andrés Nicolón ary José Luis Elizalde, ity vohikalan-dry zareo ity dia mamaly ny filàn’ireo mpamokatra horonantsary izay te hampahafatatra ny asany:
Aiza no ahitako toerana tena hanehoana ny asako amina media manan-danja, ekonomika sy malalaka kokoa toy ny aterineto? Ahoana ny asako (amin’ny maha-mpilalao sarimihetsika, mpandrakitra an-tsary [cameraman], mpamokatra, mpiangaly zavamaneno, sns.) any anaty horonantsarimihetsika mba ho be mpahalala. Tsy manana fomba hafa ve aho ary tsy maintsy mametraka ny asako hilahatra amin'ireo video folo fanta-bahoaka izay misary gaigy eny ambony soavaly? Ireo izay efa be mpahalala ve no mitazona hatrany ny toerana tsara?
Tsy ny fahafahana maneho courts metrages ao amin’ny vohikala ihany no omen’ny Cip fa sady mbola manome tolotra hafa ihany koa ry zareo: afaka manampy ireo mpamokatra sarimihetsika amin’ny fikarakarana ny famokarana sy ny famoahana, ireo effects sy ireo fanehoana an-tsehatra. Afaka manao ny fampahafantarana rehetra sy ny reaska ara-barotra ihany koa ry zareo ho an’ireo sarimihetsika ohatra ny afisy goavana, ireo ampahan-tsary fampahafantarana [trailers] ary ireo dokam-barotra amin’ny ankapobeny, na mampahafantatra sarimihetsika iray amin'ny fanomezana kintana [fomba fanomezana laharana any anaty aterineto] mba hisongadina kokoa.
Amin’izao fotoana izao, manana sarimihetsika 7 ry zareo ao amin’ny vohikala, ka 4 espanola, ny iray dia ezaka niraisana, ary 2 courts metrages avy any Uruguay, iray tantara foronin'ny saina sy iray hafa fanadihadiana. Ireo sarimihetsika rehetra ireo dia azo alaina amina format compatible ho an'ny iPod. Indrisy, ny vohikala dia tsy mamela ny hametrahana ireo sarimihetsika any amina blaogy hafa, saingy azonareo jerena ireo sarimihetsikan-dry zareo ao amin’ny vohikala,http://www.cip.com.uy/